UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOKUTHENGA KWI-Hungary | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | IGISA LOKUNDWENDWELA iHungary, ukuFudukela kwezoQoqosho ngokutyala imali yokuhlala eHungary ngotyalo-mali eHungary, ukuhlala ngokutyala imali eHungary, ukuhlala kwiinkqubo zotyalo-mali uHu
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eHungary nakwiVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eHungary:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary
● Ubummi ngotyalomali oluvela eHungary
● IVisa yegolide eHungary
● Ipasipoti yesibini evela eHungary
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary ngokutyala imali nomhlaba
Best Iiarhente zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eHungary Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eHungary kunye nabarhwebi beepropathi zokuba ngumhlali eHungary basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo mali eHungary zibonelela ngeendawo zokuhlala ngokutyala eHungary, Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eHungary, ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eHungary, ukuhlala kwakhona kwesibini ngotyalo-mali eHungary, ukuhlala kabini ngotyalo-mali eHungary, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala imali eHungary , Indawo yokuhlala isigxina ngotyalo-mali eHungary, Ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali eHungary, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eHungary, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eHungary, Ubummi ngotyalo-mali eHungary, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eHungary, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eHungary, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eHungary, ubumi bobabini ngotyalo-mali eHungary, indawo yokuhlala kunye nobumi ngokutyala imali eHungary, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eHungary, iinkqubo zobumi boqoqosho eHungary, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eHungary, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali eHungary, okwesibini ipasipoti eHungary, ipasipoti yesibini Iinkqubo ze-ort eHungary, inkqubo yesibini yokundwendwela eHungary, ipasipoti yesibini yesibini eHungary, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eHungary, ipaspoti yesibini yozakuzo eHungary, ipasipoti yesibini kutyalo-mali eHungary, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eHungary, iskim sepasipoti yesibini eHungary, okwesibini Izikimu zokundwendwela eHungary, iiVisa zegolide eHungary, iiVisa zegolide eHungary, iinkqubo zeVisa zegolide eHungary, inkqubo yegosa yegolide eHungary, iVisa yesibini yegolide eHungary, Inkqubo yesibini yegolide yaseHungary, iVisa yegolide eHungary, ubumi kunye neVisa yegolide eHungary, ukuhlala kunye ne-visa yegolide eHungary, ubummi begolide be-visa eHungary, iskim segolide se-visa eHungary, izikimu ze-visa zegolide eHungary.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali eHungary ngenkxaso eyongezelelweyo.
Utyalo-mali oluncinci eHungary lokuHlala kwakhona ngokutyala: EUR 200,000
Intshayelelo eHungary kunye nokuHlala kwakhona ngoTyalo-mali
Funda nzulu ngeHungary
IHungary lilizwe elingenamhlaba kwi-Yurophu egxile kummandla we-93,028 km2. Inemiphetho kunye neentlanga ezisixhenxe- ziwotshi ukusuka ngasemantla: iSlovakia, iUkraine, iRomania, iSerbia, iCroatia, iSlovenia neAustria.
IHungary yahlulwe nguMlambo iDanube, ophuma emantla uye emazantsi. Zintathu iindawo eziphambili zejoloji: iGreat Hungarian Plain okanye iAlfold ngasempuma kweDanube, iTransdanubia, indawo enamaqhuqhuva ngasentshona kwendlela yamanzi, kunye namathambeka angasentla. Eyona ndawo iphakamileyo yiKekes (1,014m) kwiiNtaba zeMatra. Eyona ndawo isezantsi ikufutshane neSzeged (77m), emazantsi.
IHungary inoqoqosho oluvulekileyo, kwaye intelekelelo engaqhelekanga ijongwa njengesidingo. Uqikelelo olungaqhelekanga oluthe ngqo luye lwantinga ngokufika kade, nangona kunjalo, luye lwanda ngokubanzi. Oyena mntu ungaziwayo ungaqhelekanga eHungary yiJamani, kwaye iOstriya, iNetherlands, ne-USA nazo zibalulekile.
I-33% yemizi-mveliso yaseHungary imi eBudapest. Indawo yokuthengisa yaseBudapest ineevenkile ezininzi kunye neevenkile ezinamatyathanga angaqhelekanga. IHungary ilikhaya kwizithuthi ezahlukeneyo ezenza izityalo, umzekelo, iSuzuki neAudi.
Akukho zithintelo kunaniselwano lwemali engaqhelekanga, kwaye imibutho inokubamba imali engaqhelekanga ngaphandle kwemida.
Iinyani ezili-10 eziphezulu malunga neemeko zokuphila eHungary
Umsebenzi wobomi obumangalisayo
Ukungabinamsebenzi kuphezulu eHungary, ngama-68 eepesenti kuphela abantu abaneminyaka eli-15 ukuya kwengama-64 abasetyenzisiweyo. Kwezi zisetyenzisiweyo, iipesenti ezingama-75 ngamadoda kwaye iipesenti ezingama-61 ngamanenekazi. Nokuba kunjalo, ubungakanani babameli abasebenza ixesha elide baphantsi kweepesenti ezi-4- isezantsi kakhulu kunaseMelika, apho iipesenti ezili-11 zabasebenzi zisebenza ixesha elide.
Iindlela zobomi ziphantse zancitshiswa kakhulu kwi-EU
Ukuya kuthi ga kwi-GDP, iHungary ibekwe kwindawo yama-23 kuma-28 e-EU, kwiipesenti ezingama-68 zesiqhelo se-EU. Kwindawo ekhokelayo kwindawo yase-Austria, evelisa ubukhulu becala amandla e-Hungary. Omnye umlinganiso osetyenzisiweyo ukuthatha isigqibo ngoncedo lukarhulumente kwi-shopper, eyiyo yokwenziwa komntu (AIC), ibeka iHungary kwindawo yokugqibela.
Indawo yokuhlala yoLuntu izisa imiba ekungafaniyo kokulala
Ngo-2015, urhulumente waseHungary wagqiba ukuxhasa phantse isixa esikhulu sabemi abali-1,000,000 2014 1,000,000 abonakeleyo. Ngaphambi koko, amakhulu ambalwa amawaka abantu baseHungary ngelo xesha babefumana indawo yokuhlala. Indawo yokuhlala yoLuntu ingxelo evela ngo-44.6 yaqaphela ukuba uninzi lwabantu abayi-52 XNUMX baseHungary bahlala nophahla olungalunganga kunye nokwahlula ngokubola. Ngaphantsi kwenxalenye yabemi (iipesenti ezingama-XNUMX) bahlala kwiipakethi ezipakishwe, kwaye iipesenti ezingama-XNUMX zabantu baseHungary abangahlali kwiindawo ezibalulekileyo zasezidolophini baya kumjelo ococekileyo wokuhambisa amanzi amdaka.
IHungary ineenkonzo zonyango ngokubanzi, kodwa iqondo kunye nokwanela kokubandakanywa kuphantsi
Ngaphandle kwento yokuba iHungary ibibandakanyiwe ukubakho kukhathalelo lonyango ukusukela nge1940s, ikwindawo yesithathu kwi-EU ukuya kufakwa kubume. Oku ikakhulu kungenxa yemivuzo ephantsi- iingcali zeklinikhi azinakulindela ukufumana imali eninzi eHungary ngendlela ebeya kwenza ngayo kwamanye amazwe e-EU. Umcimbi ophambili kukuqwalaselwa kokuphiliswa kweeklinikhi, endaweni yokuthintela ingqalelo kwezinye iiofisi zeklinikhi.
IHungary ifumene iphulo elikhulu elingaqhelekanga
Ukuqala kwi-2018, iHungary ingena rhoqo ngonyaka nge-4.3 yezigidigidi zeedola kwi-capita nganye ye-venture engaqhelekanga ngqo (i-FDI), ukubuyela umva ngokupheleleyo kukuma okungxamisekileyo kwemali ka-2009-10. Ngelixa oku ikakhulu okoko iHungary inemeko efanelekileyo yokuma komhlaba kwinto engaqhelekanga, iingcali zezemali ezingaqhelekanga ziye zadlulisela uxinzelelo kwizinto ezingenaxabiso kunye nokulungiselela ukutya kumashishini anomvuzo, umzekelo, isaphulelo, ukuthengisa kunye nokulungiswa kwemoto.
Amaxabiso abalulekileyo kunye nokuzikhethela ekubhaliseni amazinga aphezulu
Kwabafundi bezikolo zamabanga aphantsi, ukubhaliswa kwahlukile ngandlel 'ithile kule minyaka idlulileyo, nangona kunjalo, kuye kwahlala ngaphezulu kweepesenti ezingama-95 ubukhulu. Kwizinga eliphezulu kakhulu, izinga lokubhalisa lalingama-97.2 ekhulwini ngo-2009, kwaye ubuncinci ngo-2012, kuma-95.7 ekhulwini. Kubantu abancinci abasesikolweni, imilinganiselo yamkelekile ngokuthelekisiweyo: nangona kunjalo kuye kwakho ukunyuka okuncinci ukusukela ngonyaka we-2014 wenani labakwishumi elivisayo abaphuma esikolweni, inani eliqhelekileyo liye laya ngaphantsi kweepesenti ezintlanu.
Uqeqesho kumgangatho wesithathu lufuna iphulo
Iipesenti ezili-13 kuphela zexesha elide zinesiqinisekiso seminyaka emine, ngeepesenti ezili-9 zala manani aphethe isidanga okanye ngokufanayo. Le milinganiselo iphantsi, ukanti abantu abanezi zidanga bafumana imivuzo. Izifundo zibonise ukuba amabanga emfundo aphuma kwisikolo samabanga aphakamileyo anokuphinda kabini ingeniso yakhe eHungary: imfundo yekholeji yeminyaka emine ifanele i-premium ehlawulelweyo yeepesenti ezingama-72, ngelixa ingcali okanye ngaphezulu ingazuza ipesenti ezili-140 ngaphezulu kwembuyekezo yesiqhelo yesizwe.
Inzala kwimfundo eqhubele phambili iyaqhubeka
Umsebenzi oqhutywe yi-NGO HE Innovate ukubeka izibonelelo kwimfundo eqhubayo ibisenzeka kule minyaka ilishumi idlulileyo, ikhuthazwe kukuhla kwenkxaso mali evela kurhulumente. Eyona ndawo kugxilwe kuyo kulo msebenzi ibikukusebenzisa isikhokelo sokufundisa saseHungary ukuxhasa ukuphuculwa kwemali nezentlalo nakwezentlalo nakwezentlalo. Oku kukhuthaze ukwanda kokutshekishwa kwenkxaso-mali kunye nokudala ukuqala phakathi kwabafundi kwaye kubangele ukukhula okuqinileyo kwemali.
Amaziko amaninzi amanyene ngurhulumente wesizwe
Ukusukela kwisigqibo sakhe sepolitiki ngo-2010, iNkulumbuso yaseHungary uViktor Orban ufumene indlela yokudibanisa izinto ezininzi ezithandekayo kwimithombo yeendaba zikarhulumente kudityaniso olunenjongo. Le misebenzi ifunyenwe kakuhle kodwa ayenzeki ngabanye-uOrban uluxabisile ngokungathandabuzekiyo uncedo ngakumbi kubantu abahlala kwimimandla erustic yaseHungary kunokuba esenza kubantu abahlala kwimimandla yeedolophu ezinkulu zaseHungary.
Indawo yaseHungary iyenze indawo yokufudukela kwindawo ebalulekileyo kubantu ababekhutshiwe ngaphambili
Ukusukela kwicandelo lemiphetho yeHungary isakhelo sangaphandle se-European Union, ilizwe belifumene abahambi abaninzi ngaphambili. Ngayiphi na imeko, mva nje, iHungary ifumene indawo enzima kwimfuduko, eye yalinciphisa ngokuqatha inani labakhangeli abakwi-Middle East.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuhlala kwakhona ngoTyalo mali lwaseHungary
Ubuncinci botyalomali Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary
Imirhumo eyongezelelweyo visa yegolide ye Hangari
Indawo yokuhlala ngokutyala imali eHungary
Imvume yokuhlala isigxina kaZwelonke (isebenza iminyaka emi-5)
Iqhubekeka nexesha lokuhlala ngokutyala eHungary
Emva kweminyaka esi-8 (ubumi babini buvumelekile)
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseHungary
Iinketho zotyalo mali ze Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary
I-Euro-echongiweyo yee-Bond zoNondyebo zase-Hungary. Ukuthenga izindlu nomhlaba okanye naluphi na utyalomali alubali. Emva kweminyaka emi-5, lonke utyalomali lunokuhlawulelwa, nangona umtyali-mali esaqhubeka nokuhlala ngokusisigxina.
Kutheni uye kuhlala kwindawo yokuhlala ngokutyala iHungary
IHungary inenkqubo enkulu yemfundo, iindleko eziphantsi zokuphila. Ilizwe yindawo ekhuselekileyo nenqanaba eliphantsi lolwaphulo-mthetho. Umhlaba nomhlaba waseHungary uphantsi kakhulu. Ilizwe lineenkqubo zerhafu eziluncedo. Imvume yokuhlala ngotyalo-mali inokufunyanwa kwiinyanga nje ezimbalwa.
Ukufudukela kosapho eHungary
Emva kokufumana imvume yakho yokuhlala ngokusekwe, amalungu osapho akusondeleyo angamaqabane akho nabantwana abaxhomekeke kuwe banokufumana iimvume zabo ngokusekwe kwinjongo zokudityaniswa kosapho.
Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eHungary
Imvume yokuhlala eHungary iya kunikwa ngokusekwe kutyalo-mali kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu. Indlela ethe ngqo yotyalo-mali kukuthenga iiflethi ezimbini kwaye uziqeshise ngeenjongo zenzuzo. Inkqubo iya kuqala kuwe ukufakwa kwe-LLC eHungary, eqeshisa izindlu. Emva kokuba uthathe isigqibo sokuba zeziphi izindlu ofuna ukuzithenga. Emva kwala manyathelo uyakufumana imvume yakho yokuhlala ukusuka kwiinyanga ezi-2 ukuya kwezi-3. Ipemethe yokuhlala kufuneka ihlaziywe iminyaka emithathu, emva kwelo xesha uyakunikwa ubumi ngokusisigxina
Imfuno zezemali zeHungary
Elona xabiso lincinci lotyalo-mali yi-EUR 200,000. Esi sixa sanele ukuba sikwazi ukuhlawula izindlu ezimbini, ngokuqinisekileyo eziya kukuzisela inzuzo ngenxa yokukhula kweemarike zepropathi. Imali eyongezelelweyo yenkqubo ye-EUR 20,000 iyafuneka. Kuya kubakho irhafu yepropathi ye-4% xa uthenga iiflethi.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eHungary
Iqela lethu Kuhlala ngaBameli boTyalo mali baseHungary kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha eHungary ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eHungary ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eHungary, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela eHungary nakwamanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali evela eHungary okanye kwiVisa yaseGolide evela eHungary okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eHungary okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda kumathuba otyalo mali lokuthengisa izindlu nomhlaba eHungary, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani IHungary okanye i-offshore, izibonelelo zabantu eHungary nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi ngaphakathi naseHungary nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo yabemi baseHungary:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali yeHungary, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eHungary, abarhwebi abafudukela kwelinye ilizwe eHungary, indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi ngotyalo-mali eHungary, indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eHungary kunye nenkampani yabathengi efikelelekayo yokungena eHungary
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eHungary ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide eHungary ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eHungary ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eHungary ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eHungary ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eHungary.
Iinkqubo zeVisa zegolide eHungary ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ukusuka eHungary ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eHungary ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eHungary ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eHungary ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eHungary ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali lwaseHungary, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ngokuhlala kwabo ngokutyala imali eHungary. Sizimanyanisile nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eHungary abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezilungileyo eHungary, befumana eyona mbuyekezo.
Ezona nkqubo zintle zokuhlala izindlu eHungary notyalo mali kwiarhente yezindlu eHungary.
Kufuneka uyazi-Indawo yokuhlala yaseHungary ngoTyalo-mali
Ukuhlala kwakhona ngeGqwetha loTyalo-mali eHungary kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu olunenkcukacha malunga nokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutyala imali eHungary. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zokuba nguMhlali ngokuTyala imali eHungary kubandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eHungary okanye eHungary, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali lwaseHungary kubaxhasi ngokufumana imvume yokuhlala eHungary kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo efanelekileyo yaseHungary, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutyala imali eHungary kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalomali eHungary Amagqwetha ethu akhethekileyo okuHlala kwakhona ngokutyala imali eHungary kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kunye nosapho lwakho ukuba abe lilungelo laseHungary sele elungile, siya kuwuzalisa ngabasemagunyeni baseHungary.
Ubude bexesha: iiveki 2
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala eHungary samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye izixhasi.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngokuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eHungary kubantu abakhankanywe ngezantsi okanye amashishini eHungary:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eHungary azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ukusuka okanye ukuya eHungary.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali eHungary azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eHungary okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eHungary.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali eHungary awanikelwanga ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eHungary.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali eHungary ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eHungary.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eHungary ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eHungary.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeHungary ayifumaneki kubantu baseHungary abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eHungary, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oluntu.
Kuhlala ngotyalo-mali eHungary ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo eHungary ayizizo iinkolo zonqulo kunye nokunceda kwabo eHungary.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Hangari ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala eHungary.
Indawo yethu yokuhlala Amagqwetha eHungary abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eHungary.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseHungary kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eHungary ukuvunywa kwesicelo Kuhlala ngokutyala imali eHungary.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngeyona ndawo ingcono yokuhlala kwabaHungary kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu kunye nomhlaba eHungary.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zaseHungary, senza ezona zisombululo zibalaseleyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali eHungary zibonelela ngexabiso eliphantsi, ngezinga lempumelelo elingcono kwiHungary.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona eHungary sixhasa abathengi kunye neentsapho zabo eHungary.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eHungary kunye nabameli bezomthetho baseHungary ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zokuphatha inkqubo yaseHungary kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eHungary nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eHungary
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iHungary, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ukuhlala kwakho ngokutyala imali eHungary kungaphumeleli, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuHlala kwakhona ngokuTyala eHungary
Ukubala iindleko zokuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseHungary, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eHungary kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa eHungary
Inkqubo yeMvume yokuSebenza eHungary
Ukuhlala okwethutyana eHungary
Indawo yokuhlala isigxina eHungary
Oonozakuzaku kunye nabathunywa baseHungary
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eHungary nakwezinye iiNkonzo
Sidwelise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizinikezela eHungary ngeemfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufudukela nosapho lwakho eHungary ngokutyala, thina njengeqabane lakho eHungary, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eHungary ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala kwakhona ngokubonisana notyalo-mali eHungary, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR naseHungary, ongenakufumana phantsi kwesinye isambrela esibonelelwe nangabanye abacebisi baseHungary besenza ivenkile yokumisa enye eHungary nakwamanye amazwe e-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini laseHungary ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu ngaphaya kokuHlala kwakhona ngokutyala imali eHungary ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eHungary nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eHungary okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eHungary zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki eHungary
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eHungary uya kuyidinga i-akhawunti yebhanki yakho eHungary kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eHungary, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eHungary
Ngaba ufuna ukubonisana eHungary, kuba Izisombululo zentlawulo yedijithali eHungary Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech eHungary okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali Hungary ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eHungary ukuqala kwangoko eHungary.
Iinkonzo zabasebenzi eHungary
yethu Inkampani yabasebenzi eHungary inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona Izithuba ezikhoyo eHungary free.
Iinombolo zeFowuni eyiNtloko eHungary
Iinkqubo zeefowuni zeshishini eHungary kunye amanani abonakalayo eHungary Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eHungary
Accounting, ukukhuthala okufanelekileyo eHungary nase okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo kwiHungary
Ukuseta ishishini eHungary
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary, ukuseta ishishini kwi Hangari.
Sinikezela ngezisombululo ze-IT ezichazwe ngezantsi eHungary
Uyilo lwewebhu eHungary
Uphuhliso lwezorhwebo eHungary
Uphuhliso lwewebhu eHungary
Uphuhliso lweBlockchain eHungary
Uphuhliso losetyenziso eHungary
Uphuhliso lweSoftware eHungary
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali eHungary
Sibonelela ngokuHlala ngokusemthethweni ngezisombululo zotyalo mali eHungary kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba eHungary, siziinkokheli, inkampani yethu yezomthetho eHungary ineearhente zokufudukela eHungary, sinedumela lokuhambisa awona mava asemagqabini eenkonzo eHungary kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseHungary kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali eHungary kubonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eHungary, xa imvume yakho yokuhlala eHungary yamkelwe.
Amandla egqwetha laseHungary ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabagqwetha botyalo-mali eHungary. Ukuba useHungary okanye uceba ukutyelela iHungary, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eHungary kude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseHungary. Kuxhomekeka kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhubeke okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseHungary.
Imibuzo ebuzwa rhoqo -Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali eHungary
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eHungary?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala yaseHungary ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseHungary ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Ixhaswe kukuhlala ngeenkonzo zotyalo mali eHungary, ngokuhlala kwethu ngokugqwesileyo ngamagqwetha otyalo mali eHungary, indawo yokuhlala eyiyo ngamagqwetha otyalo mali eHungary kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo mali eHungary, abasebenza eyona ndawo yokuhlala ngokugqibeleleyo ngabatyali mali eHungary, kunye neefem eHungary.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo mali eHungary | Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo mali eHungary | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eHungary | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eHungary | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali eHungary
Iyintoni inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali eHungary?
Ubummi ngotyalo-mali eHungary, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseHungary ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseHungary ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eHungary, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseHungary exhaswa ngabemi beenkonzo zotyalo-mali eHungary, ngobona bumi bethu bubugqwetha ngamagqwetha otyalo-mali eHungary, abemi abangcono ngamagqwetha otyalo-mali eHungary nangabemi abangcono ngabacebisi botyalo-mali baseHungary, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eHungary, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eHungary.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eHungary | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eHungary | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eHungary | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eHungary | Abatyali mali abangenakufikeleleka eHungary | Iifemu zomthetho ezingenaxabiso ezifikelelekayo eHungary
Yintoni inkcazo yepasipoti yesibini eHungary?
Ipasipoti yesibini eHungary, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseHungary ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseHungary ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Iinkonzo zokundwendwela okwesibini eHungary, ngokusebenzisa amagqwetha ethu esibini epasipoti eHungary, awona magqwetha esibini eepasipoti eHungary nangabacebisi besibini abaphumeleleyo eHungary, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela eziseHungary, kunye neefemu zabaphambukeli ezilungileyo eHungary.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini zeHungary | Iiarhente zokundwendwela zesibini eHungary | Amagqwetha esibini epasipoti eHungary | Igqwetha lesibini lokundwendwela eHungary | Abacebisi bokundwendwela besibini eHungary
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eHungary?
I-visa yegolide eHungary, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eHungary ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseHungary ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, njl. Iinkonzo zeVisa zegolide zaseHungary, ngamagqwetha ethu egolide aseHungary, amagqwetha egosa aphezulu e-visa eHungary kunye nabacebisi begosa abagqwesileyo ngeHungary, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eHungary, kunye neefem zokubonelela ngabaphambukeli eHungary.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeHungary | Iiarhente zevisa zegolide eHungary | Amagqwetha egosa egolide eHungary | Amagqwetha egosa egolide eHungary | Abacebisi ngevisa abasemagunyeni eHungary
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eHungary?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala eHungary yi-EUR 200,000.
Ngaba uyayinika inkxaso yezomthetho iHungary yokuHlala kwakhona ngokutyala?
Ewe, igqwetha lethu eHungary kunye neearhente eHungary zibonelela ngenkxaso yokuhlala kwakhona eHungary.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokuTyala imali eHungary kubiza?
Iindleko zokuHlala kwakhona ngoTyalo-mali eHungary kunye nokuHlala kwakhona ngeemfuno zengxowa mali yotyalo-mali eHungary yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngokuHlala ngoTyalo-mali ukuya eHungary, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokwenza isicelo sokuhlala ngokutyala imali eHungary okanye nge-visa yomtyali mali ukuya eHungary?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala imali ukuya eHungary ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalo-mali ukuya eHungary ukusuka e-Afrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary usuka eBangladesh, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary usuka eIndonesia, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary usuka eSri Lanka, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary usuka eNepal, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eHungary usuka eIndiya naseUkuhlala kwakhona ngotyalo-mali ukuya eHungary ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali eHungary
Cela ukubonisana Simahla nokuhlala kwakho eHungary
Amagama abalulekileyo ekuhlaleni ngokuTyala imali eHungary
Umanyano lwabasebenzi baseHungary kunye nabaRhwebi
Ithala leencwadi lesizwe leSzechenyi
Imiboniso eBudapestUnxibelelwano lukaloliwe lwe-MAVHangari
Igumbi lezorhwebo neShishini leBudapest
IOfisi ye-Ofisi yeSithili seHungary
Ikhasi lasekhaya leNkcubeko yaseHungary
IKözponti Statisztikai Hivatal
IiNkonzo zoonozakuzaku baseHungary phesheya
Igumbi lezorhwebo laseHungary kunye neShishini
Ubambiso lwaseHungary e-US
Amazwe atyhutyha imishini kwilizwe langaphandle eHungary
Iphepha laseKhaya laseHungary
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eHungary , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eHungary